आफ्नै पार्टीका सांसदले प्रम ओलीको सेखी झारेपछि !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
आफ्नै पार्टीका सांसदले प्रम ओलीको सेखी झारेपछि !
काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्यबृद्धि गरिएको र यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट समेत कायमै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बजार अनुगमन गर्नुपर्ने र यातायात क्षेत्रमा कडाईका जानुपर्ने उनीहरुको माग छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ व्यवसायीसँग मिलेर सिण्डिकेटबाट पछि हटेपछि सत्तारुढ सांसदले संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निशाना बनाउँदै प्रश्न उठाएका हुन्।
संघीय संसदको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको गुनासो गरे । उनले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाएको भने पनि सिण्डिकेट कायमै रहेको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए ।
नेकपाकै अर्का सांसद् अमनलाल मोदीले बजेट भाषणलगत्तै दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्य आकासिएको बताए । उनले बजार अनुगमन गरेर मूल्य बढाउनेलाई कारबाही गर्न माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् अमरेशकुमार सिंहले भने सरकार र व्यापारीको मिलेमतोमा बजार भाउ बढाइएको आरोप लगाए ।
सांसदहरुले शून्य समयमा उठाएका विषयको सम्बन्धित मन्त्रीले ५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।